Vizio TV တွင် VGA port ရှိသလား။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > Vizio vga input - ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ
Vizio vga input - ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ
Vizio TV တွင် VGA port ရှိသလား။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့Vizio တီဗီများရှိသည်တိုက်ရိုက်VGAinput ကိုသင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလိုအပ်တယ်သင့်ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်ရန်အထူး adapter ။
ဘာလဲ youtube ကဒီ gorsky vonborsky ရုပ်မြင်သံကြားဖြစ်ပြီးယနေ့ငါသင် vc cable ကိုမှတဆင့်သင်၏ pc သင့်ရဲ့ lcd ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ချိတ်ဆက်ပုံကိုယခုငါပြောပါလိမ့်မယ်အခုသင်ကြည့်နေသောအရာသည်ကျွန်ုပ်၏တီဗီဖြစ်ပြီးယခုဤတွင်ကျွန်ုပ် pc သို့သွားမည်။ ဤတပ်ဆင်မှုအတွက်သင်သေချာပေါက်လိုအပ်မည့်ကေဘယ်ကြိုးနှစ်ချောင်းသည်ပထမအချက်မှာ 15-pin VGA cable ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်သင်၏ TV သို့အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ပုံများပို့ဆောင်ပေးနိုင်မည့် SVG cable တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တော်တော်ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်တွင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောကေဘယ်ကြိုးသည်အဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးတွင် ၃.၅ မီလီမီတာအပေါက်တစ်ခုပါ ၀ င်သည့်အသံကေဘယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဤအမျိုးအစားရှိရမည်၊ တစ်ခုမှာသင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့တစ်လုံး၊ သင်၏တီဗွီသို့တစ်ချပ်ထည့်လိုက်သည်ကိုကြည့်ပါစို့ my pc အဆင်ပြေသွားပြီ။ ဒီမှာ VGA slot ကတကယ်တော့ VGA splitter ရှိတယ်ဆိုတာကိုမင်းမြင်နေရပြီ။ ဒီမှာငါကွန်ပျူတာနောက်ကျောမှာရှိတယ်။ ဒါကငါဂရပ်ဖစ်ကဒ်တစ်ခုသာငါ့ကွန်ပျူတာမော်နီတာထဲကိုရောက်ဖို့ဒီကေဘယ်ကြိုးတွေတစ်လုံးလိုတယ်။ ဒီမှာကဘာလဲeနှင့်အခြားကေဘယ်ကြိုးသည်ကျွန်ုပ်၏တီဗီသို့သွားမည်။ ကျွန်ုပ်၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးပါကချိတ်ဆက်ပြီးချိတ်ပါလိမ့်မည်။ သင်မြင်နိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်၌ရာဘာကြိုးအချို့ရှိနေသည် ဖြစ်၍ ၎င်းသည်ပလပ်များ၏အဆုံးများမှာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ VGA Splitter ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစကားလုံးနှင့်ကိုက်ညီခြင်းသင့်ကွန်ပျူတာမှသင်၏တီဗွီတွင်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးပြissuesနာများနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်း၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဤတပ်ဆင်မှုကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသူ၌အဟောင်းဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုထားသောကွန်ပျူတာအဟောင်း ရှိ၍ သူသည်အမြင်အာရုံနှင့်အမြင်အာရုံအချို့ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ သူမ၏တီဗီဂရပ်ဖစ်ကဒ်ပြားကိုသင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ၊ ဒီဟာကအကောင်းဆုံးနည်းပဲ၊ မဟုတ်ရင်မင်းမှာဂရပ်ဖစ်ကဒ်ရှိတယ်ဆိုတာသေချာအောင်ပြသမှုကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ signal ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီ၊ အခုငါ့အသံကေဘယ်လ်ကိုသွားမယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကြိုးကေဘယ်လ်အဘယ်နေရာတွင်ပါ ၀ င်သည်မှာကျွန်ုပ်၌ nen splitter တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပြင်ပစပီကာအချို့ရှိပြီးကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုကျွန်ုပ်၏တီဗီသို့ချိတ်ဆက်လိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏တီဗီစပီကာများမှတစ်ဆင့်အသံကိုကြားနိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းင်း၏အသံကြိုးလိုအပ်သည်။ to ge အသံကို VGA ကေဘယ်လ်ဖြင့်မထုတ်လွှင့်သဖြင့်သင်၏တီဗီကိုအသံလွှင့်နေသည့်သင့်ကွန်ပျူတာမှအသံကိုဤသည်ကျွန်ုပ်ချက်ချင်းထိုးလိုက်သည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကေဘယ်လ်ကိုကျွန်ုပ်၏တီရှပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏တီဗီ၏နောက်ဘက်တွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ TV ကိုအလင်းပြန်ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အရာအားလုံးကိုဖြုတ်ထုတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ပြီးပါကကျွန်ုပ်၏ PC ထဲသို့ ၁၅-pin VGA connector နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကေဘယ်ကြိုး ၂ ခု၏အဆုံးရှိသည်။ ဆောင်းပါးတပုဒ်နှင့်အသံသုံးမီတာမီတာအကွာအဝေးတစ်မီလီမီတာအပေါက်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရုပ်မြင်သံကြားတွင်တစ်နေရာတည်း၌ကျွန်ုပ်၏ 15-pin plug ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် PC နှင့် RBG ဖြင့်မှတ်သားထားသည်။ ။
audio jack သည် slot တစ်ခုသို့ဝင်သွားပြီဖြစ်သည်။ သင့် PC တွင် ၃.၅ မီလီမီတာအပေါက်ရှိသည့်သင်၏ PC မှကေဘယ်လ်ကြိုးရှိပါက Audio inRGB DVI ဟုပြောသော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင် RCA Ports နှင့်အခြားတစ်ခုအနေဖြင့်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားနေပါက သင်၏ PC TV မှအသံသည်၎င်းနှင့်အဆင်မပြေပါ၊ RCA23.5mm adapter ရရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းကို၎င်းကို၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့်သီးခြား slot တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ယခုငါဖွင့်မည့် audio InRGB / DVI ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ TV ပုံသဏ္throughာန်မှတဆင့်ရုပ်ပုံနှင့်အသံများကိုသင်၏ပီစီမှသင်၏တီဗီသို့လွှဲပြောင်းနိုင်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်၏ TV တွင်သင်၏တီဗီ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံး menu ကိုနှိပ်ပြီး input option သို့သွားခြင်းဖြင့်၊ ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏ input ကို RGB သို့ပြောင်းလဲခြင်းငါ့ရုပ်မြင်သံကြား၌ပြသသောပုံသည်ငါ့ computer ပေါ်ရှိပုံနှင့်အတူတူကြောင်းသင်မြင်နိုင်ပါသည်။
ဒါကိုဖွင့်ပြလိုက်ပြီး web browser ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ မင်းကြည့်ကောင်းတဲ့အသံပြelseနာတွေအကြောင်းပြောချင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီတပ်ဆင်ခြင်းဟာမကောင်းဘူးဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်သည်တီဗွီကိုအသံကျယ်ကျယ်ဖွင့်ရန်လိုသည် ငါ့ရဲ့ pc ကိုငါ့ရဲ့တီဗီမှာထားပေမဲ့အဲဒါကိုပြင်ဖို့နည်းလမ်းရှိသေးတယ်။ Windows7မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမင်းရဲ့ screen အောက်ညာဘက်ထောင့်မှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ Volume icon ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပွင့်လာလိမ့်မယ်။ အပေါ်ဘက်ရှိစပီကာအိုင်ကွန်သင်၏အသံပမာဏကိုနှိပ်ပါ၊ မီနူးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထိုမီနူးတွင် Extensions and Other Enhancements ကိုနှိပ်ပါ။ သင် Loudnessequalizer အမည်တပ်ထားသော check box တစ်ခုသင်နှိပ်နိုင်ပြီးသင်၏အသံသည်နူးညံ့လွန်းပါက၎င်းသည်အလိုအလျောက်တိုးလာလိမ့်မည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော့်အသံကိုနှစ်ဆတိုးသွားတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ TV ကို VGA cable နဲ့အတူဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုဆောင်းပါးကြည့်နေတဲ့အတွက်သင့်တင့်တဲ့အသံရဖို့ကျွန်တော့် TV ကိုတကယ်ဖွင့်စရာမလိုဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ရုပ်သံလိုင်းသို့စာရင်းသွင်းပြီးကျွန်ုပ်၏အခြားဆောင်းပါးအချို့ကိုစစ်ဆေးပါ
Vizio TV ကိုကွန်ပျူတာမော်နီတာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ကွန်ပျူတာမြင်ကွင်း၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်လိုသူအသုံးပြုသူများသည်လုပ်နိုင်ဒါကြောင့်အသုံးပြုခြင်းရန်Vizio ရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခုရှိသည်ကွန်ပျူတာမော်နီတာ။သင်အသုံးပြုနိုင်သည်ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ရန် VGA cable သို့မဟုတ် HDMI cable တစ်ခု။အသုံးပြုခြင်းHDMI cable တစ်ခုသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရုပ်ပုံများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော်လည်း VGA ကြိုးတစ်ခုသည်လုံလောက်သောရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
ယနေ့ခေတ် New Things New Tech တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် 4K TV ကိုသင်၏အဓိကကွန်ပျူတာမော်နီတာအဖြစ်နေ့စဉ် သုံး၍ ရနိုင်သလားဟူသောမေးခွန်းကိုလေ့လာနေသည်။ အကယ်၍ သင့်စားပွဲခုံတွင် ၄၀ လက်မအရွယ် CRT မော်နီတာတစ်လုံးရှိပါကအတိတ်ကာလကမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ (MUSIC INTRO) သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မော်နီတာမည်မျှလိုအပ်သနည်း။ 1, 2,36 12 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို? အများကြီး? ဟုတ်ကဲ့! ပိုများသောစွမ်းအား! လက်ရှိ၌ကျွန်ုပ်၏ GTX 970.30.3 ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက် HD HD 1920 x 1080 မော်နီတာများတပ်ဆင်ထားပြီး၊ စတုတ္ထနေရာမှာကျွန်ုပ်သည် Huion GT 220 ပုံဆွဲမော်နီတာဖြစ်သည်။
မော်နီတာအားလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး၊ သူတို့ကအိုမင်းလာပြီးပြproblemsနာတွေစဖြစ်လာကြတယ်။ ဒီတစ်ခုကဒီမှာနှင့်ရှိတစ် ဦး pixel ရှုံး; ၎င်းသည် capacitor (သို့) မှောင်မိုက်သောပုံရိပ်များတွင်တောက်လောင်နေသောအခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုပျက်ကွက်ခြင်းစသည်တို့စတင်သည်။
ဒီတစ်ခုကတော်တော်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်တခြားနှစ်ခုလောက်မရှင်းလင်းဘူး၊ နည်းနည်းလေးသေးတယ်။ ဒါကြောင့်အဲဒါတွေကိုဖလှယ်ပြီးကိုက်ညီတဲ့မော်နီတာ ၃ ခုရဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ အသစ်လျောက်ပတ်သော 1920 x 1080p ၂၄ လက်မမော်နီတာများသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ၀ န်းကျင်တွင်စျေးပေါပြီးစျေးပေါကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့မှသင့်လျော်သောမော်နီတာများဖြင့်အစားထိုးရန် ၃ မှ ၄၀၀ အထိရှိသည်။
ဒါကတော်တော်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုပါ။ ငါ 4K ဆောင်းပါးများကိုတည်းဖြတ်ချင်။ 4K အကြောင်းအရာ၊ ဂိမ်းများနှင့်အခြားအရာများကိုကြည့်လိုသောကြောင့် 4K မော်နီတာသို့ပြောင်းပါ။ သင်လှည့်ပတ်ကြည့်လျှင် 4K 27 လက်မမော်နီတာများသည်ယခုအဆင့်ရှိမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်ဒေါ်လာ ၂၃၀ မှဒေါ်လာ ၄၀၀ နှင့်အထက်အထိရှိသည်။ ယခုဘတ်ဂျက်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၀ မှ ၁၂၀၀ ကြားကြားရှိသည်။ အိုကေတော့နေ့စဉ်အလုပ်နဲ့ရံဖန်ရံခါကစားစရာတွေသုံးချင်တာထက်နည်းနည်းပိုစျေးကြီးသွားတယ်။
ငါဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေသောအခြားပြproblemနာတစ်ခုမှာဤစားပွဲပေါ်ရှိရှုပ်ထွေးမှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါး၊ ပါဝါနှင့်အချို့သော power အုတ်များအတွက်ဤကြိုးများအားလုံးရှိသည်။ ထိုအခါငါယူရီကာကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်! ငါဗျာဒိတ်တော်! ငါ 4K တီဗီကြီးတစ်ခုသုံးပြီးသူတို့ထဲက ၃ ခုကိုဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်တယ်။
စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုလို! ဤကြော်ငြာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Target, Best Buy နှင့်အခြားသူများသည်ရုပ်မြင်သံကြားစက်များတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်များစွာရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီတော့ဒီတီဗီအသစ်တွေရဲ့ကျန်တာတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်။ 40K လက်မအကွာအဝေးရှိ 4K TV တစ်ခုအတွက် 1080p မော်နီတာများကိုအစားထိုးရန်လုံလောက်သောအရာဖြစ်သင့်သည်။ 1080p မော်နီတာများကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်။ ဒီ Vizio ၄၀ လက်မတီဗီကိုကျွန်တော့်ရဲ့အဓိက PC အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်သည်။
dxdiag command line
၎င်းသည် Target တွင်ဒေါ်လာ ၂၄၀ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ငါ၏အ Target စက်ဝိုင်းငွေစုနှင့်အခြား 5% လျှော့ချထည့်ပါ။ ဒေါ်လာ ၂၄၃ လောက်အခွန်နဲ့ငွေစုပြီးတဲ့နောက်မှာစမ်းသပ်ဖို့ ၄K လက်မ ၄၀ တီဗီရှိခဲ့တယ်။ အဆိုးဆုံးကိစ္စမှာကျွန်ုပ် 4K တည်းဖြတ်သည့်ဆောင်းပါးများကိုအနည်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်သောအိမ်၌ကျွန်ုပ်၌ 4K တီဗွီရှိနေသေးသည်။ ဒါကြောင့်ကြည့်ကြရအောင်! တီဗီကိုဖြုတ်လိုက်တာအတွင်းမှာပဲ Vizio 40- Inch panel၊ TV စင်တာနှစ်ခု၊ mounting screw နှစ်ခုပါတဲ့ package တစ်ခု၊ remote control နဲ့သုံးဆ -A ဘက်ထရီ ၂ ခုတပ်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက်များပါ ၀ င်ပါတယ်။
တီဗီစင်များကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ သူတို့ကအတူတူပဲ၊ ဒါကြောင့်သင်တပ်ဆင်တာကိုမမှားနိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ ရပ်ကွက်များကိုတီဗီအခြေစိုက်စခန်းထဲသို့ထည့်ပါ၊ ၎င်းတို့ကိုသော့ခတ်ရန်ဝက်အူများထည့်ပါ။ ဤအရာအားလုံးသည်ရိုးရိုးလေးသာဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏။ ဘက်ထရီများကိုဝေးလံခေါင်ဖျားတွင်တပ်ဆင်ရန်၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားသောနေရာကိုလှန်လိုက်ပါ။ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းသို့မဟုတ်အခြားသေးငယ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုထည့်ပြီးနောက်သို့ဆွဲထုတ်ပါ။ အခုငါ Vizio စုဝေးလာပြီ၊ ငါမော်နီတာအဟောင်းတွေအားလုံးကိုထုတ်ပစ်လိုက်ပြီ၊ အထက်က ၅ ကငါအလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အထူး VPN စက်နှင့်ချိတ်ဆက်လိုက်ပြီ၊ အဓိကမော်နီတာသုံးခုကငါဟာပုံမှန်နေ့စဉ်အလုပ်နှင့်ကစားခြင်းအတွက်အသုံးပြုတာပါ။
စတုတ္ထမြောက်မော်နီတာသည်ကျွန်ုပ်၏ Huion Drawing Tablet Monitor အောက်တွင်ရှိသည်။ ငါပြီးသွားရင် Huion Drawing Tablet ကိုသုံးပြီး 4K TV မော်နီတာတစ်ခုပဲသုံးမယ်။ ဒါကလေးယောက်လုပ်သင့်တယ်။ လေး။ လေး။ 1080p မော်နီတာ။
4K တီဗီအသစ်ကိုပလပ်တပ်ပြီး၊ voila ကောင်းကောင်း၊ ငါအခြေခံတည်ဆောက်မှုကိုသွားရတော့မယ်။ ဒါကငါ့ရဲ့ setup ဖြစ်တယ်။ Vizio ကို GTX 970 နဲ့ TheHuion GT- ရှိ HDMI port သုံးပြီးကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ 220 ပြသမှုဆိပ်ကမ်းကိုချိတ်ဆက်။ GTX 970 သည် HDMI port မှတဆင့် 4K UHD ကိုအသုံးပြုရန်လုံလောက်သည်။ ထို့အပြင် 970 သည်ဂိမ်းနှင့်ဆောင်းပါးအများစုအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ PC သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှ Q6600 အခြေပြုကွန်ပျူတာတစ်ခုဖြစ်လိုပါသလား။ 4K article editing သည် smoo r ဖြစ်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသော gaming ကောင်းရန်အတွက်မကြာမီအလုံအလောက်ကောင်းသော Ryzen7သို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစနစ်ဖြင့်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ ယခုအဘို့, ဒီ setup ကိုဤစမ်းသပ်မှုများအတွက်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ အိုး။ စားပွဲခုံသည်ရပ်နေသည့်စားပွဲခုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ရပ်နေခြင်းမှထိုင်ခြင်းသို့ပြောင်းနိုင်သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ပုံမှန်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကွာအဝေးကနေ ၂ ပေအကွာမှာရှိတယ်။ ၄၀ မှ ၄၃ ထက်ကြီးသောမည်သည့်တီဗီမဆိုအကွာအဝေးတွင်အလွန်များနိုင်သည်။ Vizio တွင် HDMI ထည့်သွင်းမှု (၃) ခုပါ ၀ င်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးတွင်အသံနှင့်ထွက်ရန်သယ်ဆောင်ရန်အသံပြန်ပေးသည့်ချန်နယ်တစ်ခုရှိသည်။ ကိရိယာထည့်သွင်းခြင်း၊ ဆောင်းပါးများ၊ တေးဂီတစသည်တို့အတွက် USB port ရှိသည်။ တီဗီသည် WiFi နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်
အကောင်းဆုံးသောကြိုးသည်အကောင်းဆုံးကွန်ယက်အမြန်နှုန်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဤတွင်တစ်ခု optical အသံ output ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အင်တင်နာ (သို့) cable coax connector ကိုဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။
ထိုအ ooohh, ထိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ် ဦး ပေါင်းစပ် input ကိုရှိသည်ဖို့ပုံရသည်! ဒါကြောင့်အခုငါဆောင်းပါးဂိမ်းအဟောင်းများ, ကင်မရာအဟောင်းနှင့်အခြားပေါင်းစပ်ဆောင်းပါးထုတ်ကုန် plug in နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် ငါတို့သည်ဤစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်! သင်အဝေးထိန်းကိုမတွေ့ပါကအခြေခံတီဗီဆက်တင်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နောက်ဘက်ရှိခလုတ်များဖြစ်သည်။
အိုး Vizio TV အတွက်စပီကာများသည်အောက်ခြေတွင်ရှိသည်။ လျောက်ပတ်စွာဒီဇိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲ -Design ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့စတင်ပုံ၊ ဒေသ၊ ဘာသာစကား၊ ကွန်ယက်၊ အိုင်ဒီများ၊ HDMI ထည့်သွင်းမှုများစသည်တို့ကို setup လုပ်ရန်ပုံမှန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။
မီနူးသည်သင့်အားလက်စွဲကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ အရောင်ချိန်ညှိခြင်းကဏ္aအပြည့်အစုံရှိပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီတီဗွီကိုညှိနိုင်သည်။ ဒီအရာအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။
အခမဲ့ TV၊ Smart Casting၊ ထိပ်တန်း streaming ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ကွန်ပြူတာတက်နေပြီ၊ တီဗွီကဆောင်းပါးလက်ခံနေတယ် အကောင်းဆုံးပုံကိုရွေးချယ်ရန်ရုပ်ပုံခလုတ်သို့မဟုတ်ရုပ်ပုံမီနူးကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာ၊ ကျနော့်အမြင်မှာကွန်ပျူတာ mode ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်အပြာရောင်နှင့် HDR-E ၏အနည်းငယ်လည်းဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်သင်ကအနိမ့်အမြင့်ကိုဖွင့်နိုင်ပုံရှိသည်၊ ငါကွဲပြားခြားနားမှုကိုမပြောနိုင်ပါ။ စတိုးဆိုင်ရှိ Vizio tag နှင့် Vizio သတ်မှတ်ချက်များအရ၊ ဤတီဗွီတွင် 120 Hz refresh Rate ရှိကြောင်းပြသသည်! အဲ့ဒါမမှန်ဘူး! ဤတီဗီပါသောဂရပ်ဖစ်ကတ်၏အမြင့်ဆုံး refresh rate မှာ ၆၀ Hz ဖြစ်သည်။
ကို virtual app ကို didlogical
TV ဟာ 60 Hz ကိုသာ update လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အတွင်းထဲရှိမှော်ဆော့ဖ်ဝဲအချို့သည် 120Hz ရရှိရန်ရွေ့လျားမှုကိုလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ဆိုလိုတာကအချိန်ကုန်လွန်လာရင်ပုံကချောချောမွေ့မွေ့ရှိလိမ့်မယ်။
120Hz စစ်မှန်တဲ့လိုင်းကိုရဖို့အတွက်သင်ဟာ 120Hz ထိရောက်တဲ့ refresh rate 240Hz ရှိတဲ့တီဗွီမှာပိုသုံးဖို့လိုတယ်၊ အဲဒါဟာတကယ်တော့ 120Hz refresh rate နဲ့ညီတယ်။ ရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်လော Uh အစပိုင်းမှာတော့စာသားဟာမျှတနေပုံရပါတယ်။ စာသားကကြည်လင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းအရောင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ။
GTX 970 ၏ချိန်ညှိချက်များသည် ၄ ​​င်းတို့ကို 4Hz အပြည့်ဖြင့် 60Hz Refresh Rate ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးယခုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးမှာ 32 bit color depth နှင့် 12-bit perceived color နှင့်အတူဘီလီယံနှင့်ချီသောအရောင်များဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ ! (Explosion) ပြီးတော့ YCbCR422 ဆက်တင်ကတော်တော်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေပုံရတယ်။ သူတို့ကိုသင်လိုချင်သည့်အတိုင်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။ မျက်နှာပြင်veryရိယာသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၁၀၈၀ မော်နီတာအဟောင်းများထက်ပိုမိုသေးငယ်သည့်ပြတင်းပေါက်ငယ်များကိုဖွင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ် 40'UHD မျက်နှာပြင်အပြည့်သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ ငါကဒီတီဗီကနေ ၂ ပေလောက်ပဲရှိတာမို့ ၄၀ 'ဟာကြီးမားပြီးကြီးလွယ်တယ်။
ဆောင်းပါးတည်းဖြတ်မှုအတွက်လား။ ကောင်းပြီလား တည်းဖြတ်သည့်အခါ 4K ဆောင်းပါးသည် Premiere ကိုအမှန်တကယ်ဖိအားပေးသည်။ ဒါကြောင့်တည်းဖြတ်ခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်၏မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအားလုံးအတွက် proxy များကိုဖန်တီးရသည်။ ၎င်းကို 4K အပြည့်ဖြင့်ပြန်ဆိုနိုင်သည့်အထိပိုမိုမြန်ဆန်သော၊ သန့်ရှင်းသောတည်းဖြတ်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။
Photoshop, Blender, Krita (သို့) အခြားပုံဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ကာတွန်းလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်အတွက်ဒီ Vizio မော်နီတာသည်အလွန်ကောင်းပါတယ်။ Huion ပုံဆွဲရန်အတွက်တက်ဘလက်ဆွဲသည်။ သို့မဟုတ်ငါပြုသလော ပုံဆွဲခြင်းareaရိယာကို Vizio တွင်တပ်လိုက်သည်နှင့်တူသည်။ ဆောင်းပါးရေးဆွဲခြင်းတက်ဘလက်ကိုကျွန်ုပ်၏စံစားပွဲအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါတော်တော်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ကစားနည်းကဒီမှာငါရွေးစရာတွေအများကြီးပေးထားတယ်။ ငါ ၄၀ 'Vizio မှာကစားနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ၇၀' ၄ ကေတီဗီမှာချန်ထားလို့ရတယ်၊ ငါစမ်းကြည့်ရအောင်၊ ငါဒီ Namco TV Games mini console ကိုတူးလိုက်ပြီ။
အချို့သောဘက်ထရီများကိုထည့်ပါ၊ တော်တော်လေးအလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ အဆိုပါ upscaling တော်တော်လေးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ system ဂိမ်းများအတွက်။
ရဲ့ရေနွေးငွေ့ကြိုးစားကြည့်ကြစို့။ Shomb of the Tomb Raider: အဓိပ္ပါယ်ရှိသောထုတ်ဝေမှု။ Tomb Raiders တော်တော်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်
ငါလုပ်ခဲ့တာနောက်တစ်ခုကဖုန်ထူလာတဲ့တီဗွီမှာ Samsung အသံဘားထပ်ထည့်တယ်။ မင်းက TV အောက်မှာမနေခဲ့ဘူး၊ ရှေ့ကနေရာကိုယူဖို့၊ ပိတ်ဆို့ဖို့စတာတွေကိုမလိုချင်ခဲ့ဘူး။ အခုလား။ သူတို့ကဒီဘားနှင့်အသံလှိုင်းကဲ့သို့လူစည်ကားသကဲ့သို့အသံမရကြဘူး။
Vizio စပီကာတွေကတော်တော်တော်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပိုသဘောကျသွားတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ TV ရဲ့နောက်ဘက်မှာထားခဲ့တဲ့ VESA နံရံအဟောင်းတွေနဲ့ကျန်ပစ္စည်းတွေကျန်နေသေးတယ်။ Soundbar mounting hardware ကိုထည့်ပါ။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ virtual surround sound စနစ်ကောင်းကောင်းရပြီ။ စပီကာများတွင် virtual surround sound လည်းရှိသော်လည်းပြင်ပ subwoofer နှင့်စပီကာစနစ်တို့ကဲ့သို့ bass လေးလံမှုမရှိပေ။
ယေဘုယျအားဖြင့် ၄၀ လက်မ Vizio TV သည် Main PC Monitor အနေနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ အရောင်နဲ့အသုံးဝင်မှုရှိတာတွေအားလုံးဟာကောင်းပါတယ်။ 4K ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသော PC မော်နီတာများအတွက်တတ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ New Things, New Things Tech ကိုကြည့်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါ Scott Drudge ပါ (ပြင်ပဂီတ)
ကျွန်ုပ်၏ VGA output ကို input တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
TO သို့VGA connector ကိုများစွာသော AV အစိတ်အပိုင်းများတွင်တွေ့ရှိရပြီးအဓိကအားဖြင့်တွေ့ရှိရသည်အသုံးပြုခံ့သင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူကွန်ပျူတာများချိတ်ဆက်သည်။ ပြီးတော့သင်သိရတာအံ့သြဖို့ကောင်းတယ်လုပ်နိုင်ဆက်သွယ်ပါVGA output ကိုHDMI တစ်ခုသို့input connection။ ထိုအသင်အားလုံးမဟုတ်ပါဘူးလုပ်နိုင်HDMI ကိုဆက်သွယ်ပါVGAအရမ်း!20 မေလ 1221
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော် Plugable Technologies မှဘော့ပါ
ယနေ့ငါပြသမည်အနေဖြင့် VGA cable မှတစ်ဆင့်သင်၏ system နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော display တစ်ခု၏ settings ကိုမည်သို့ညှိရမည်နည်း။ ယခုအကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူများအတွက်နောက်ခံအနည်းငယ်သာ Desktop သို့မဟုတ် laptop system သို့ display ကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုနိူင်သည့် cable အမျိုးမျိုးရှိသည်။ VGA သည်အသုံးပြုဆဲဆဲအဟောင်းဆုံးစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
VGA cable သည် analog article signal ကိုသယ်ဆောင်ပြီးအချို့သောအခြေအနေများတွင် display ပေါ်ရှိပုံသည်သူမလိုအပ်သောအရာများကိုမကြည့်မိစေပါ။ ကျွန်တော်ပြချင်တာကသင်လိုအပ်လျှင်ဤဆက်တင်များကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ရဲ့ချက်ချင်းစတင်ကြပါစို့။
ယခုသင်တွေ့မြင်ရသည့်အရာမှာကျွန်ုပ်၏စားပွဲပေါ်ရှိ Dell U2412M display သည် VGA cable နှင့်အတူကင်မရာအပြင်ဘက်ရှိ laptop တစ်လုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က screen အောက်ခြေဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာပြhaveနာရှိနေတယ်ဆိုတာမင်းမြင်နိုင်မလားမသိဘူး။ start ခလုတ်ပျောက်နေသည်။
အဲဒါဖြတ်လိုက်ပြီ သင်ဒီမှာအစွန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်၊ လက်ချောင်းထိပ်ရဲ့အကျယ်တလျှောက်မှာအနက်ရောင်ဘားအနည်းငယ်ရှိတယ်၊ မျက်နှာပြင်ကအဆုံးသတ်ပြီးဘောင်ကစတယ်၊ display တစ်ခုလုံးကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့သွားသလိုမျိုး။ ဒီတော့ဒီ setting ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးပြီးပြောင်းလဲလဲ။ ငါမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ display ကိုခေါ် OSD ကိုခေါ်ထုတ်ရန်ငါ display ကို၏ရှေ့မှောက်၌ခလုတ်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
အခြေခံအားဖြင့်မတူညီတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေပါတဲ့မီနူးတစ်ခု။ ငါနိုးလာတာနဲ့ menu option ကိုရွေးပြီး display settings ကို scroll လုပ်ဖို့ arrow keys ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ သတိပြုရန်မှာဤ display settings သည် VGA cable နှင့် DVI, HTMI သို့မဟုတ် display port Adjustment ကဲ့သို့သောအခြားသော cable အမျိုးအစားများရှိသည့် system နှင့်သာအသုံးပြုပါကပေါ်လာသည်ကိုသတိပြုပါ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်မီနူးဟာတကယ်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ ဒါဆိုငါပြန်လာကြစို့။ ပြသမှုချိန်ညှိချက်များသို့ပြန်သွားပါ။
ဒီနေရာမှာငါဒီ settings အချို့အလျားလိုက်အနေအထား၏စည်းကမ်းချက်များ၌လုံးဝမှန်ကန်ကြည့်ရှုမရကြဘူးဒီမှာ။ ဒီချိန်ညှိချက်ကိုငါရွေးပြီးချိန်ညှိလိုက်ရင်၊ ပုံတစ်ခုလုံးကိုနောက်ကျောကိုပြန်မြင်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ယခုငါစတင်မီနူးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နယ်နိမိတ်မရှိ။
အိုကေ၊ ဒီဟာလက်စွဲညှိနှိုင်းမှုဖြစ်တယ်။ ဒါကိုအလိုအလျောက်လုပ်နိုင်မလား။ ကောင်းပြီ, အချို့ကိစ္စများတွင်လည်းမရှိ။ ငါ့ကိုထားခဲ့ပါ
ကောင်းပါပြီ။ အရာအားလုံးကိုသူတို့မှားယွင်းတဲ့လမ်းအတိုင်းပြန်စီမယ်၊ မှားတယ်၊ ကိစ္စတော်တော်များများမှာ VGA display သည် Auto Adjust လို့ခေါ်တဲ့ရွေးစရာတခုရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါကသင့်အတွက်အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ဒီ option ကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါ display ကသူ့ဟာသူအလိုအလျောက်တည့်သွားပြီဆိုတာသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘက်မှာ start ခလုတ်ကိုတွေ့တယ်။ ညာဖက်မှာအနက်ရောင် border မရှိတော့ဘူး။ ဒီမှာ menu ကိုထွက်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး အမြန်မွမ်းမံရုံ။
VGA display ကိုအသုံးပြုသောအခါတစ်ခါတစ်ရံတွင် display settings ကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာရုပ်ပုံတစ်ခုလုံးကို display ပေါ်တွင်ပြလိမ့်မည်။ မျှော်လင့်ပါတယ်သင်ဤအသုံးဝင်သောနှင့်စောင့်ကြည့်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှာပါ။
Vizio TV ပေါ်တွင် VGA input ဘယ်မှာလဲ။
VGA input ကို Vizio တီဗီအများစု၏အနောက်ဘက်တွင်တွေ့ရသည်။ ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းအစအပေါ် screw နှစ်ခုတင်းကျပ်။ သင့်ကွန်ပျူတာမှအသံကိုသင်၏ Vizio နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာ၏နားကြပ်ပေါက်မှ ၃.၅ မီလီမီတာကေဘယ်ကြိုးကို Vizio နောက်ဘက်ရှိ audio input သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ ဒီ input jack ကို VGA input ဘေးမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင်၏ Vizio နှင့်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ Vizio တီဗွီကိုကွန်ပျူတာမော်နီတာအဖြစ်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
TV ကိုဖွင့်ပါ၊ ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်ထားသည့် HDMI input သို့ရောက်သည်အထိ Vizio ဝေးလံသောရှိ HDMI ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပါ၊ တီဗွီတွင်ပြသထားသောကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကိုသင်တွေ့ရမည်။ VGA cable မှတဆင့်ချိတ်ဆက်မိလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ Vizio ဝေးလံခေါင်ဖျားရှိ input အရင်းအမြစ်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သနည်း။
သင်၏ Vizio ဝေးလံခေါင်ဖျားရှိ input အရင်းအမြစ်ကိုပြောင်းပါ။ Vizio remote ၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်၌ 'Input' ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။ ဗွီဒီယိုရင်းမြစ်များကိုပြောင်းလဲရန်ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
HDMI cable ကို VGA cable နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ။
VGA cable ကိုကွန်ပျူတာ၏ VGA output သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ ကျန်ရှိနေသော VGA Cable ၏ဘေးထွက်ကို converter box ၏ VGA input ထဲသို့ထည့်ပါ။ HDMI output ကိုသင့်ရဲ့ converter box နဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။ သင်၏ HDMI cable ၏ HDMI ထည့်သွင်းမှု port ကိုတီဗီသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာမော်နီတာထဲသို့ထည့်ပါ။